Feedier: Madal Jawaab Celin Abaal-marin ah | Martech Zone
Feedier: Madal Jawaab Celin Abaal-marin ah
Axad, Febraayo 10, 2019 Isniin, February 11, 2019 Douglas Karr
Ma jirto maalin i ag socota oo aan la ii soo bandhigi doonin ra'yi ururin, sahan, ama la i weydiin maayo jawaab celin. Ilaa iyo intaan ku qanacsanahay ama aan ka xanaaqsaneyn calaamadda, caadi ahaan waan tirtiraa codsiga oo waan sii socdaa. Dabcan, marba mar, mar baa lay weydiiyaa jawaab celin waxaana la ii sheegaa in la ixtiraami doono oo lay abaalmarin doono.
Quudiye waa madal jawaab celin ah oo kuu oggolaaneysa inaad soo ururiso jawaab celinta adoo abaalmarinaya macaamiishaada. Waxay helayaan khibrad gaas ah oo gaar ah waxaadna helaysaa jawaab celin qiimo leh oo aad raadineyso. Madal loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fudud ee la isticmaali karo!
Feedier waa qaab muuqaal ah oo buuxa, waxaana ka mid ah:
Abuurista Template & Bot - Adeegso arrimo horay loo qeexay ama bot-abuurkeena si aad isugu diyaariso dhowr daqiiqo gudahood, dhib malahan. Habee astaanta, midabka ugu weyn, sawirka daboolka si aad uguhesho iskuxidhnaanta ururkaaga. Adiga iska dhig adoo kudaraya domain gaar ah, intro content, note footer iyo xitaa bedel luqadda. Xitaa waad u dhaqaajinkartaa xamuulkaaga xaraf taariikh gaar ah.
La macaamil macaamiishaada - U dir e-mayllada la habeeyay liisaskaaga, u dir qoraalo habaysan lambarrada taleefannada, ku dheji widget qurux badan boggaaga ama abka webkaaga, ama waxaad abuureysaa PDF daabacan oo aad ku rari karto alaabtaada si aad u ururiso ra'yi-celinta.
Abuur 5 nooc oo su'aalo macno leh - Feedier wuxuu taageeraa qoraalka gaaban, natiijada NPS, slider, xul iyo qoraal dheer noocyada su'aalaha dabacsan. Waad u soo bandhigi kartaa su'aalaha khuseeya isticmaaleyaasha saxda ah iyadoo lagu saleynayo sida ay ugu qanacsan yihiin, ama aad u abuuri karto su'aal ballaaran oo ku saleysan jawaabihi hore ee isticmaaleha iyo xaalado aad qeexday Naqshadeynta dhaqdhaqaaqa quruxda badan ayaa la heli karaa si loo abuuro khibradaha ugu fiican, ee gamcaha ah.
Abaal mari dadka isticmaala - Bixi rasiidh iyo foojarro si aad u dhiirrigeliso iibsiyada mustaqbalka adoo xakameynaya u-suurtagalka guusha. U soo dir faylal khaas ah sida waxyaabaha gaarka u ah isticmaaleyaashaada oo ay la socdaan abaalmarinta emaylka ay helaan. Haddii ay tahay fure shati, casuumaad gaar ah ama nooc kasta oo fariin caadadeed ah, Feedier ayaa kuu soo diri doona. Waxa kale oo aad ku bixin kartaa lacag dhab ah adoo adeegsanaya Paypal oo ay bixiso Feedier oo leh xadka qaybinta iyo suurtogalnimada la qeexay.
Qabsoo ururi dib u eegista isticmaalayaasha iyo emayllada - Muuji badhanka qiimeynta 5-xiddig kaliya si aad ugu qanacdo uguna mashquuliso adeegsadayaasha barnaamij kasta sida Amazon. Muuji badhannada raacsan ee shabakadaha bulshada ee aad ugu jeceshahay dhammaadka waayo-aragnimada jawaab celinta. Hel markhaatiyo cusub adoo ogaanaya isticmaalayaasha faraxsan oo ka codsanaya inay kuu daayaan markhaati buuxa oo ay la socdaan emaylkooda. Kordhi liiskaaga joornaalka tan iyo markii emayllada loo baahan yahay si loo helo abaalmarinta.
Daawee jawaab celinta si gaar ah - Feedier wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kula xiriirto macaamiishaada si toos ah emaylkooda iyo CRM-kaaga. Warbixin dhameystiran ayaa loo dhisay jawaab celin kasta si aad ugu fahmi karto macaamiil kasta hal guji. Bogga abaalmarintu waxay kuu oggolaaneysaa inaad gasho liiska abaalmarinnada la qaybiyey si aad toos ula xiriiri karto.
Falanqeyn xoog leh - oo ay ku jiraan aaladda la isticmaalay, biraawsar, garaafka waqtiga, jawaabaha, qanacsanaanta, tirada jawaab celinta, booqashooyinka, dalalka ugu fiican, waqtiga celceliska, iyo NPS. Sahmiyaha ereyga muhiimka ah wuxuu kaa caawinayaa inaad sahamiso dhammaan jawaabahaaga adoo raadinaya keywords gaar ah.
Qalabka Maamulka - U dir dhoofinta jawaab celinta ee u dhiganta miirayaashaada firfircoon .CSV ama .JSON hal guji. Ku maaree kooxdaada doorar kala duwan si aad u hesho inta wada shaqeyneed ee aad ugu baahan tahay wada shaqeynta. Hesho ogeysiisyo ku saabsan waxa ka socda koontadaada Feedier iyo sidoo kale warbixinno faahfaahsan toddobaadle ah.
Isku-darka Feedier - Feedier wuxuu hayaa dukumiinti JSON REST API ah si uu horumariyahaagu ugula midoobo barnaamijyadaada iyo qalabkaaga. Ku dhis Zapier ZAPs waxyaabaha kiciya Feedier si aad u sameyso ficiladaada markasta oo aad hesho jawaab celin. Ku hel culeyska JSON cinwaankaaga webhook URL markasta oo jawaab celin la helo dhammaan faahfaahinteeda.
Iyo, waayo Martech Zone akhristayaasha, waa tan a 20% kuuboon qiimo dhimis ah markii aad iska diiwaangeliso nambarka ogeysiiska WELCOMEFEEDIER2018.
Saxiix u noqo Feedier
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa isku xiraheena xiriirka Feedier qodobkan.
Fahamka Wareegga oo Buuxa: Qiyaasta metronka iyo Qaabeynta iibka